Xaqiiqooyin cajiib ah oo ku saabsan Erdogan - Muraayad
Xaqiiqooyin cajiib ah oo ku saabsan Erdogan
Erdogan hadda ka hor wuxuu soo maray xabsi.
Madaxweynaha Turkiga | Image Credit: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
Recep Tayyip Erdogan waa madaxweynaha dalka Turkiga, horayna wuxuu uga soo noqday Ra’iisul wasaare.
Mar kale ayay indhaha caalamka hayaan madaxweyne Erdogan kaddib markii uu xabsiga u taxaabay janaraallo howl gab ah oo kasoo hor jeestay mashruuc uu daah furay oo kanaal looga dhisayo Istanbul.
Waxaa jira xaqiiqooyin ku saabsan Erdogan oo dadku inta badan aysan ka war qabin.
Wuxuu dhashay February 26, 1954.
Wuxuu ku dhashay Isnatbul Turkey.
Aabihiis waxaa la oran jiray Ahmet Erdoga, wuxuuna ka tirsanaan jiray ciidanka badda oo uu kabtan ka noqday.
Hooyadiis waa Tenzile Erdogan.
Xaaskiisa waa Emine (Gulbaran) Erdogan, oo ay wada joogaan laga soo billaabo July 4, 1978 ilaa hadda.
Wuxuu dhalay afar carruur ah oo kala ah labo wiil iyo labo gabdhood.
Ka hor inta husan siyaasadda ku biirin, Erdogan wuxuu ahaa ciyaartooy kubadda cagta ah, inkastoo uusan gaarin heer uu ku biiro kooxaha mushaarka bixiya.
Erdogan waxaa lagu tilmaamaa hoggaamiye xukunkiisa uu cadcad yahay.
Dadka taageera waxay ku ammaanaan in uu sare u qaaday dhaqaalaha Turkiga.
Waxaa kale oo uu aad ugu dadaalay inuu xoojiyo awoodda militari ee dalkiisa iyo saameynta uu ku leeyahay dibadda.
Doorka siyaasadda ee Erdogan
Marxalado kala duwan ayuu Recep Tayyip Erdogan kasoo maray siyaasadda dalkiisa.
1984 – Waxaa loo doorat madaxa degmada ee xisbiga Welfare.
1985 – Waxaa loo doorat madaxa heer gobol ee Istanbul u qaabilsan xisbiga Welfare, wuxuuna ka mid noqday xubnaha taliska dhexe ee xisbiga.
1994-1998 – Wuxuu ahaa Duqa magaalada Istanbul.
1998 – Waxaa la mamnuucay xisbigii Welfare. Erdogan wuxuu qaatay afar bilood oo xabsi ah kaddib markii lagu qabsaday arrimo diin naceyb ah iyo gabay kicin ah oo uu tiriyay.
August 2001 – Wuxuu siyaasiyiin kale la aasaasay xisbiga hadda talada haya ee AKP.
2002-2003 – Xisbiga Erdogan ee AKP ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, isaga ayaana loo doortay Ra’iisul Wasaare.
2003-2014 – Wuxuu ahaa Ra’iisul Wasaaraha Tukriga.
June 2011 – Xisbiga AKP ayaa ku guuleystay inta badan kuraasta doorashada baarlamaanka, wuxuuna fursad u helay in markii saddexaad uu noqdo Ra’iisul Wasaaraha awoodda badan ee maamulayay dalkaas.
June 2013 – Waxaa Turkiga ka dhacay Mudaharaadyo looga soo hor jeedo siyaasadaha Erdogan, oo uu ka mid ahaa qorshe uu ku doonayay inuu beeraha nasashada ee shacabka u baddalo dhismeyaal suuqyo ah.
December 2013 – Waxaa la fuliyay baaritaanno musuqmaasuq ah oo lagu sameeyay inta badan siyaasiyiintii ku hareereysnaa Erdogan. Bishii xigtay dowladdu waxay shaqada ka eriday 350 askari oo ka tirsanaa booliska.
March 2014 – Kaddib markii uu Erdogan ku hanjabay inuu burburinayo Twitter-ka waxaa bartaas bulshada laga mamnuucay waddankiisa.
August 10, 2014 – Erdogan waxaa loo doortay madaxweynaha Turkiga iyadoo markii ugu horreysay la qabtay doorasho toos ah.
November 2014 – Kulan ay haween soo qaban qaabiyeen oo uu Erdogan ka qayb galay ayuu ka sheegay in ragga iyo dumarku aysan sinneyn maadaama ay abuurka ku kala duwan yihiin.
June 7, 2015 – Doorashadii baarlamaanka ee Turkiga ka dhacday waxay xisbiga AKP ku guuleysteen 41%.
July 15-15, 2016 – Turkiga waxaa ka dhacay afgambi dhicisoobay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 161 qof halka 1,140 kalena ay ku dhaawacmeen. Afgambigaas waxaa lagu doonayay in Erdogan xilka looga tuuro, balse ma suurtagalin.
May 16, 2017 – Erdogan wuxuu Aqalka Cad kula kulmay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump. Markii ay labada madaxweyne shir jaraa’id oo wadajir ah qabteen, mudaharaad ayaa ka dhacay bannaanka goobta uu dagganaa Erdogan. Sagaal ruux ayaa ku dhaawacmay falcelintii ay sameeyeen ilaalada Turkiga.
October 12, 2017 – Erdogan wuxuu Mareykanka ku eedeeyay inuu sameynayo ficillo burburinaya xiriirkooda. Khudbad uu arrintaas ku shaaciyay ayuu sidoo kale ku diiday inuu warqadaha aqoonsiga ka aqbalo safiirkii Mareykanka ee loo diray Ankara.
December 2017 – Erdogan wuxuu canbaareeyay tallaabadii uu Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa’iil. Wuxuu Erdogan Israa’iil ku tilmaamay “maamul argagixiso ah oo carruurta laaya”.
June 24, 2018 – Mar kale ayaa Erdogan loo doorway madaxweynaha Turkiga.
November 2, 2018 – Erdogan wuxuu maqaal uu u qoray Wargeyska Washington Post ku sheegay in amarkii lagu dilay wariye Jamaal Khaashuqji uu kasoo baxay dowladda Sucuudiga.
January 14, 2019 – Erdogan iyo Trump waxay ka xaajoodeen howlgalladii ka socday Suuriya.
October 9, 2019 – Turkiga wuxuu howlgal militari ku qaaday Waqooyiga Suuriya.
October 22, 2019 – Erdogan wuxuu magaalada Suchi kula kulmay madaxweynaha Ruushka, Vladamir Putin, waxayna heshiis ka gaareen arrimaha Suuriya.
January 2, 2020 – Baarlamaanka Turkiga ayaa Erdogan u fasaxay inuu muddo hal sano ah ciidamo geeyo dalka Liibiya si ay ula dagaallamaan xoogagga ka amar qaata Janaraal Khalifa Xaftar.
Previous article8 nin oo aad looga cabsan jiray dunida
Next article5 arrimood oo u fiican caafimaadka indhahaaga